Lavasoft: kedu ihe ọ bụ na ihe mejupụtara ya | Nzukọ mkpanaka
Daniel Terrasa | 17/09/2021 09:00 | Mmemme
Iji kwuo maka ya Lavasoft, ihe ọ bụ na ihe anyị ga -eji ya mee, ọ dị mkpa ịkọwapụta nke mbụ ihe anyị ga -ekwu maka ụlọ ọrụ na ngwaahịa ya nwere aha ọzọ: Ada. Ma ọ bụ na kemgbe 2018 nke a bụ aha ọhụrụ nke ụlọ ọrụ mmepe ngwanrọ a ma ama ọkachamara na ịchọpụta spyware na malware.
Akụkọ banyere Lavasoft bidoro na Germany na 1999 site na mwepụta nke Adaware, otu n'ime ngụkọta ngwanrọ mbụ dara n'ahịa. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, na 2011, Lavasoft nwetara site na ego nhatanha nkeonwe akpọrọ Ego Solaria, na -akwaga idozi n'obodo Gothenburg nke Sweden.
Ugbu a isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ (nke a na -akpọbu Adaware, aha ngwaahịa flagship) dị na Montreal, Canada.
Ụlọ ọrụ ahụ na -enye nnukwu ngwaahịa Adaware na nsụgharị atọ dị iche iche: otu n'efu na akwụ ụgwọ abụọ (Pro na ngụkọta). Mana ọ na -erekwa ọtụtụ ihe ngwọta na ọrụ ndị ọzọ dị ka Adaware Ad Block, Adaware Web Companion, Lavasoft Digital Lock, Lavasoft File Shredder ma ọ bụ Igbe Ozi Nzuzo Lavasoft, n'etiti ndị ọzọ.
Agbanyeghị, mgbe anyị jụrụ onwe anyị ajụjụ "Gịnị bụ Lavasoft?" anyị na -ekwu maka ya Antivirus antivirus. Nke a bụ eziokwu egbu egbu nwere ike ịchọpụta ma wepu ụdị malware niile, spyware na adware. Inye mkpuchi megide nje kọmputa, Trojans, bots, nje na mmemme ndị ọzọ na -emerụ ahụ maka kọmpụta anyị.
1 Spyware na malware, ihe iyi egwu na kọmputa gị
2 Antivirus Lavasoft
2.1 Ibudata na nwụnye
2.2 Kedu ka o si arụ ọrụ?
3 Ụdị ụgwọ nke Lavasoft Adaware ọ bara uru?
3.1 Dị Pro
3.2 Total Version
Spyware na malware, ihe iyi egwu na kọmputa gị
Lavasoft, kedu ihe ọ bụ? Karịsịa, mkpuchi maka kọmputa anyị megide malware na spyware
Ọtụtụ nde mmadụ na -eji ịntanetị site na ngwaọrụ ha n'akụkụ niile nke ụwa. A na -ekpughere ha niile n'ihe egwu dị na ya mmemme obi (malware) na spyware. Lavasoft, nke bụbu ọrụ dabere na nchekwa ịntanetị kemgbe mmalite ya, na -emezigharị ngwaahịa ya ọtụtụ afọ iji kpochapụ ihe egwu ndị a ma belata mbibi ha.
Mana imeri onye iro, ihe mbụ ị ga -eme bụ ịmata ya nke ọma. Yabụ ka anyị cheta ihe ha bụ na ihe ha nwere ike ime anyị.
Ọ dịghị onye na -adịghị ize ndụ site na mwakpo nke a mmemme nledoỌbụghị ọbụna kọmpụta nkeonwe nke anyị na -eji naanị maka ọrụ dị mfe yana, n'ụkpụrụ, ọrụ na -enweghị mmasị.
Ụdị mmemme ndị a na -etinye onwe ha na kọmpụta ma na -agba oge ọ bụla kọmputa bidoro. Site n'ime nke a, ọ na -eji ma ebe nchekwa CPU na RAM, si otú a na -ebelata nkwụsi ike nke kọmpụta ahụ. Na mgbakwunye, spyware anaghị ezu ike, na -enyocha mgbe niile ka anyị si eji ịntanetị eme ihe, na -ejikarị ebumnuche mgbasa ozi.
Ụdị software a na -esochi nleta anyị niile na ibe Ịntanetị ma na -emepụta nchekwa data nke ihe masịrị anyị na mmasị anyị iji zitere anyị mgbasa ozi ezubere iche. Ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na, na usoro a niile, spyware na -eripịa akụrụngwa na kọmputa anyị ọ na -emekwa ka ọ na -arụ ọrụ na -adị nwayọ karịa ka o kwesịrị.
Okwu a bụ ndebiri okwu a Obi ojoo software, nke pụtara n'asụsụ bekee "malicious program." Amuru mmemme izizi nke ụdị a na ebumnuche nke ịghọ ihe njakịrị na-enweghị isi nke ndị ọkà mmụta sayensị maara nke ọma na-eme: ọtụtụ n'ime ha zoro n'azụ na-akpọ ezi ebumnobi dịka gosi ntụpọ nchekwa nke ibe weebụ na sistemụ arụmọrụ.
Mana malware na -adaba ngwa ngwa n'ime ihe ndị gbara ọchịchịrị ma ọ bụ nke iwu na -akwadoghị. Ụdị malware nke na -anọchite anya nnukwu ihe egwu dị na kọmpụta anyị dị ọtụtụ ma dịkwa iche iche (nje, ikpuru, Trojans ...), mana enwere nke akọwapụtara nke Lavasoft lebara anya pụrụ iche na idozi: adware.
Mgbasa ozi (Ngwanrọ mgbasa ozi ma ọ bụ adware) bụ mmemme na -egosipụta mgbasa ozi mgbe ị na -emepe ibe weebụ site na eserese, akwụkwọ mmado ma ọ bụ windo na -ese n'elu mmiri: Mgbasa ozi na -akpasu iwe nke na -egosi mgbe anyị na -achọ ịwụnye mmemme bụkwa adware.
Lavasoft Adaware: ihe ọ bụ na ihe mejupụtara ya
Usoro ihe omume ahụ Lavasoft Ad-Aware bụ ngwa ngwanrọ mgbochi spyware nke emere iji lụso ụdị spyware na malware niile ọgụ. Anyị na -ekwu maka ngwaahịa nwere arụmọrụ egosipụtara nke ọma. Ezi ihe akaebe nke a bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị ọrụ 300 gburugburu ụwa na -eji ya. Nke a mere Adaware ka ọ bụrụ ngwa nchedo kachasị ewu ewu maka kọmputa dakọtara na sistemụ Microsoft Windows.
La free version Enwere ike ibudata mmemme Adaware na ekwentị gị gọọmentị webụsaịtị (budata njikọ: Ada).
Iji malite usoro nrụnye, anyị ga -agba faịlụ nrụnye Adaware site na isoro usoro ndị a:
Anyị na-ahọrọ asụsụ wee pịa bọtịnụ ahụ "Inabata" nke na -egosi na ihuenyo nnabata.
Anyị na-elele igbe ahụ "Ekwenyere m" usoro nke nkwekọrịta ikike wee pịa "Osote".
Mgbe ahụ, anyị ga -pịa bọtịnụ ahụ. "Wụnye", si otu a malite usoro, nke nwere ike were nkeji ole na ole.
Ozugbo echichi ahụ zuru, ị ga -emerịrị ya Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa.
Ọ bụrụ na echichi gara nke ọma, Adaware ga -amalite na akpaghị aka oge ọ bụla anyị gbanyere kọmputa anyị. Enweghị anyị ịme ihe ọ bụla, mmemme ahụ ga -ejikọ na ịntanetị iji melite onwe ya wee budata nkọwa malware ọhụrụ. A ga -etinye ozi ọhụrụ a n'ime mmemme oge ọ bụla anyị malitegharịa PC anyị. Nke ahụ bụ, oge ọ bụla anyị malitegharịa, anyị ga na -emezi arụmọrụ antivirus a.
Imepe mmemme aka ị ga -eso ụzọ ndị a:
Malite> Mmemme niile> LavaSoft> Ad-Aware
Ma ọ bụ pịa akara ngosi ụzọ mkpirisi na -egosi na enyo anyị ma ọ bụrụ na nrụnye emeela nke ọma. N'ọnọdụ ọ bụla, na ma ọ bụ na -enweghị iwu anyị, Adaware ga -aga n'ihu ịchọ ma chọpụta ndị nwere ike ịbanye na faịlụ anyị, na -ewepụ ihe niile na -enyo enyo ma ọ bụ ihe nwere ike ibute kọmpụta anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji akaware jiri akaware anyị ga -pịa akara ngosi "Nyochaa sistemụ" egosiri na ihuenyo ụlọ mmemme. Nyocha a, nke nwere ike were nkeji ole na ole, na -egosi n'ihi ọnụọgụ faịlụ enyochala yana ole n'ime ha ka amatara dị ka malware ma ọ bụ spyware. A na -ewepụ ihe ndị a na akpaghị aka.
Ọ bụrụ na anyị enweghị oge iji na -ehicha ngwa anyị mgbe niile, enweghị nsogbu. Anyị ekwuola na mbụ Adaware na -elekọta ihe niile na -ajụghị anyị. Mgbe ịmalite kọmputa gị, a na-akpọ mmemme Ad-Aware bi Ad-Watch Live! Ebumnuche ya: iji soro ma kpochapụ ihe ọjọọ ọ bụla na -anwa ịwụnye onwe ya na kọmpụta anyị na -enweghị ikike.
Agbanyeghị na ọ bụ ngwa bara ezigbo uru, ọ nwere ike bụrụ na mgbe kọmputa anyị na -arụ ọrụ ọ nwere ike na -arụ ọrụ nwayọ nwayọ. Nke ahụ nwere ike bụrụ ihe nhụsianya ma ọ bụrụ na anyị na -ekiri ọdịnaya na -enuba ma ọ bụ na anyị na -arụ ọrụ ọzọ. Ọ dabara nke ọma, anyị nwere nhọrọ nke gbanyụọ Ad-Watch!, ọbụna nwa oge. Enwere ike ịrụ ọrụ a n'ime sekọnd ole na ole site na ịpị akara ngosi ya na bọtịnụ aka nri nke kọmpụta ahụ.
Ihe dị mkpa: ụdị Lavasoft Adaware na -arụ ọrụ akọwapụtara nke ọma (nchọpụta na iwepu spyware na adware), nwere oke. Maka nke a, enweghị ike ịtụle ya antivirus zuru oke. Nke ahụ bụ ihe nsụgharị akwụ ụgwọ bụ maka.
Ụdị ụgwọ nke Lavasoft Adaware ọ bara uru?
Ọ bụ ezie na ụdị Lavasoft Adaware na -enye uru ndị a na -apụghị ịgbagha agbagha, ọ ga -ekwe omume na ọ dabara adaba dị ka ezigbo ngwaọrụ maka nchekwa na ịdị ọcha nke kọmpụta anyị. Nhọrọ ịkwụ ụgwọ doro anya nke ukwuu. Ịchọpụta ma ọ bụrụ na ha bara uru ịkwụ ụgwọ ha ga -adabere na mkpa na ọnọdụ onye ọrụ ọ bụla.
Dị ka aha ya na -egosi, eburu ya n'obi maka ndị ọrụ ọkachamara. Nhọrọ maka ndị ọrụ dị elu ma na -achọsi ike. N'ime uru ndị ọzọ, ọ na-enye anyị nchekwa nbudata, na-egbochi ịnweta weebụsaịtị dị ize ndụ na iyi egwu dị n'ịntanetị, ma jiri ihe nzacha mgbochi spam dị ike na-echebe akaụntụ email anyị. Ogo nchedo na ọrụ ụlọ akụ dị n'ịntanetị na -atọkwa ụtọ nke ukwuu, otu n'ime ebumnuche ndị omempụ kacha achọsi ike.
Na mgbakwunye, Adaware Pro na -enye nkwado teknụzụ dị n'ịntanetị na -adịgide adịgide nye ndị ọrụ ya. Ọ na -enyekwa nhọrọ ndị na -atọ ụtọ dị ka njikwa nne na nna (ọ dabara adaba ma ọ bụrụ na ụmụaka na -eji kọmpụta eme ihe) ma ọ bụ hichapụ faịlụ na PC anyị oge ụfọdụ.
A na -akwụ ụgwọ Lavasoft Adaware Pro na € 36.
Nchekwa kachasị elu. Maka ihe ọ bụla ụdị Pro na -enye, Lavasoft Adaware Total na -agbakwunye ụdị ihe mgbochi dị iche iche n'akụkụ niile enwere ike ibuso ndị ọrụ mpụga ọgụ. Ya mere, ọ na -etinye antivirus ọhụrụ na nke dị irè, antispyware, firewall na antiphishing system, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ọzọkwa kwesịrị ịrịba ama bụ Ogwe Ngwa Nzuzo, n'ihi na echiche a nwere njikọ chiri anya na nchekwa. Totaldị nsụgharị bụ maka ijikọ echiche abụọ na ịtụgharị ndị otu anyị ka ha bụrụ ike na -agaghị emeli emeri.
Ọnụ ego Lavasoft Adaware Total bụ € 48.
Ihe kacha nta chọrọ iji wụnye nke ọ bụla n'ime ụdị atọ nke Adaware (n'efu, Pro na ngụkọta bụ ndị a:
Windows 7, 8, 8.1 na 10 sistemụ arụmọrụ.
Microsoft Windows version installer 4.5 ma ọ bụ karịa.
1,8 GB nke ohere diski ike (gbakwunyere opekata mpe 800 MB na diski sistemụ).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Lavasoft: kedu ihe ọ bụ na ihe mejupụtara ya